​Weerar lagu qaaday Kantaroolka Boosaaso
Puntland: ​Weerar lagu qaaday Kantaroolka Boosaaso
BOOSAASO, Puntland- Mallayshiyaad hubaysan ayaa xalay saq dhexe weerar ku qaaday Kantaroolka laga galo magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, halkaasoo dhowr jeer lagu qabtay qaraxyo kooxda Al Shabaab doonaysay inay galiso magaalada.
Weerarka oo dhacay Abaare 01:00am habeenimo xilliga Bariga Afrika, waxaa ka dhashay khasaaro isugu jiro dhimasho iyo dhaawac.
Sarkaal katirsan laamaha amniga Puntland oo la hadlay Garowe Online ayaa xaqiijiyay in tirada dhimashadu gaarayso 8 qof oo uu ku jiro taliye ku-xigeenkii saddexaad ee ciidanka Kantaroolka Boosaso kaasoo lagu magacaabi jiray Abshir Maxamud Muuse (Caato). Dadka dhintay ayaa u badan shacab waxaa ku jira haween, kuwasoo maydkooda la geeyay Cusbitalka Boosaaso.
14 qof oo Shacab ah ayaa ku dhaawacmay weerarkaas xilli ay ku sugnaayeen nawaaxiga Kantaroolka Boosaaso gaar ahaan halka gawaarida lagu celiyo habeenkii.
Sarkaalkan oo magaciisa codsaday inaan la shaacin ayaa ku waramay in ciidamadu iska difaaceen weerarka mallayshiyadaas oo uu sheegay inay ahaayeen Al Shabaab.
Majirto wax war ah oo ilaa hadda kasoo baxay Dowladda Puntland.
Dhinaca kale lama oga cida fulisay weerarkaas, balse waxaa lagu tuhmayaa kooxda Al Shabaab oo inta badan mas’uul ka ah falalka amni darro ee ka dhaca gobolka Bari.
Arrintan ayaa timid xilli maalmo kahor Madaxweyne Gaas abaal-marin siiyay ciidamo ay ku jiraan kuwa Kantaroolka, kadib markii ay gacanta ku dhigeen Qaraxyo iyo lacago faalso ah oo si dhuumasho ah lagu doonayay in lagusoo galiyo xarunta ganacsiga Puntland.
​Puntland oo ka digtay in la dhaqan-galiyo xeerka Is-gaarsiinta Somalia
Puntland 09.07.2017. 20:30
GAROWE, Puntland- Wasaaradda Warfaafinta iyo Is-gaarsiinta Puntland ayaa ka digtay in la ansixiyo Xeerka Isgaarsiinta dalka Somalia, oo bishii hore qalinka ku duugeen golaha xukuumadda dowladda Federaalka.
Xeerkan oo hadda horyaala golaha Barlamanka Som ...
Puntland 13.07.2017. 23:01
​RW Khayre oo bogaadiyay Carwada Buugaagta Muqdisho
War Saxaafaded 14.09.2017. 21:19
​Madaxweyne ku-xigeennada Puntland iyo Galmudug oo kulmay [Dhagayso]
Puntland 04.09.2017. 21:39